स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives – Page 46 of 85 – Samacharpati
पोखरा,६ फागुन । बतास फाण्डेशनले आज पोखरामा आयोजना गरेको खुला रक्तदान कार्यक्रमबाट ४७ युनिट रगत संकलन भएको छ । पोखरा महानगरपालिका–९,नयाँबजारस्थित बतास शोरुमको प्राङ्गणमा आयोजना भएको कार्यक्रममा रक्तसञ्चार केन्द्र पोखराले प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराएको थियो । बतास व्रदर्शका चिफ अपरेटिङ अफिसर राजेश रानाभाटले पहिलो रक्तदाता प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई व्लड व्याग हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए […]
पोखरा, ६ फागुन । पोखरा १२ लालीगुराँस शान्ति टोलमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । लालाीगुँरास शान्तिटोल विकास संस्था र लालिगुँरास शान्तिटोल आमा समूहको संयुक्त आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा लालीगुँरास टोलवासीहरु जम्मा १०५ जनाले निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण सेवा लिएका थिए । निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण अन्र्तगत व्लड प्रेसर, तापक्रम, तौल, सुगर, कोलस्टोर, युरीक एसिड जस्ता […]
काठमान्डाैँ, ६ फागुन । माया, प्रेम वा ‘लभ’ले एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध जोड्ने अवसर मात्र दिँदैन, स्वास्थ्यमै अभूतपूर्व फाइदा गर्छ। मायाका अनगिन्ती स्वास्थ्य फाइदा छन्। मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा निम्न नौवटा फाइदा यस्ता छन्ः छालामा चमक मायामा पर्दा एउटा अनौठो अनुभव हुन सक्छ। आफूलाई संसारकै उच्च स्थानमा रहेको अनुभूति हुनुको अतिरिक्त मायाले तपाईंको छालामा चमक थपिदिन्छ। विज्ञहरुका अनुसार मायामा […]
काठमाडौं, ६ फागुन । धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पशुपतिको गजुरजस्तै शिवलिंगको पिठिकासमेत अब भक्तजनबाट सहयोग मागेर सुनले सिंगारिने भएको छ । तर, पिठिकामा भने सुनको जलपमात्र हुनेछ । पिठिकामा हाल चाँदीको आवरणयुक्त जलहरी मात्रै छ । तर, अब त्यसलाई हटाएर सुनको जलहरी बनाउन लागिएको हो । पशुपतिनाथका शिवलिंग अमूल्य धरोहरका रूपमा रहेकाले त्यसको संरक्षण […]
पोखरा, ५ फागुन । सामुदायिक सेवा केन्द्र एवम् सामुदायिक प्रहरी सेवा पोखरा–१ वगर तथा वगर व्यवसायी कल्याणकारी समिति पोखरा –१ वगरको संयुक्त आयोजनामा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ७० औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको उक्त रक्तदान कार्यक्रममा ६५ जना रक्तदाताले रक्तदान गरेका थिए ।कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख […]
काठमान्डाैँ, ५ फागुन । कतिपयको बानी हुन्छ, नङ टोक्ने । फुर्सद पाउनसाथ उनीहरु नङ टोक्न थाल्छन् । जबकी आफुले नङ टोकिरहेको उनीहरुलाई भेउ हुँदैन । नङ टोक्ने बानी सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यसले स्वास्थ्यमा निकै नराम्रो असर पुर्‍याउँछ । के पनि भनिन्छ भने, नङ टोक्नु भनेको तनावग्रस्त हुनुको संकेत हो । तर हामी हाम्रो नङ […]
काठमान्डाैँ, ४ फागुन । मुटुको धड्कन छिटो-छिटो भयो भने वा अस्वभाविक धिमा भयो भने त्यसलाई राम्रो मानिदैन । यसले गंभिर रोगको संकेत गर्छ । मुटुको चालमा गडबडी भएमा त्यसले फोक्सो, कलेजो, मिर्गौला, मस्तिष्कलाई समेत प्रभावित बनाउँन सक्छ । सामान्य अवस्थमा मुटुको धड्कन रेट ६०-९० प्रति मिनेट हुन्छ । यदि हार्ट रेट बढेर १०० बिट्स प्रति मिनेटभन्दा […]
भुपाल गुरुङ, पोखरा, २ फागुन । दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि स्याङजाको विरुवा गाउपालिका वडा न. ७ किउखोलाका ४० वर्षिया सुक बहादुर दमै (अर्जुन) ले सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । हाल वालिङ नगरपालीका ९ भुम्रेबस्दै आएका अर्जुनको दुवै मृगौला फेल भई हाल पोखरामा डाइलोसिस गर्नुपर्ने भए पछि आर्थीक सहयोग गरेर जिवन रक्षा गरिदिन सबै संग […]
शरीरबाट विषाक्त पदार्थ कसरी निकाल्ने ? शरीर कसरी शुद्धिकरण गर्ने? यास्ता छन विधी
काठमान्डाैँ, २९ माघ । अचानक हामीमा आलस्य अनुभव हुन्छ ? अचानक अनुहारमा दाग, धब्बा देखापर्छ ? पाचन तन्त्र गडबडी हुन्छ ? यदि त्यसो हो भने, हाम्रो शरीरमा विषाक्त तत्व बढेको छ । अब के गर्ने त ? कसरी शरीरबाट विषाक्त पदार्थ निकाल्ने ? कसरी शरीर शुद्धिकरण गर्ने ? यहाँ सामान्य विधी दिइएको छ । १. बिहान […]
दमौलीमा सञ्चालित महायज्ञ सम्पन्न, १०८ फिट अग्लो व्यासमूर्ति बनाउन साढे तीन करोड सङ्कलन
दमौली, २९ माघ । कूल १०८ फिट अग्लो व्यासमूर्ति निर्माणका लागि जनस्तरबाट रकम सङ्कलन गर्ने उद्देश्यसहित तनहुँको दमौलीमा आयोजना गरिएको महायज्ञबाट करिब रु तीन करोड ५० लाख सङ्कलन भएको छ । व्यासक्षेत्र शिवपञ्चायन विकास कोषको आयोजनामा माघ २० गतेबाट शुरु भएको महायज्ञबाट करिब साढे तीन करोड रकम सङ्कलन भएको हो । महायज्ञबाट अनुमान गरेबमोजिम नै […]
पोखरा, २९ माघ । कास्कीको माछापुच्छे गाउँपालिका–२ सार्दिखोलामा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत लामो अवधिको अस्थाई साधनको प्रयोग सम्वन्धी सेवाका लागि क्याम्प आयोजना गरिएको छ । गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामामा सार्दिखोला स्वास्थ्य चौकीमा लामो अबधिको अस्थायी परिवार नियोजन साधन आइयुसिडी र इम्पाल्न्ट लिन इच्छुक महिलाहरुका लागि सेटलाइट क्याम्प सञ्चालन गरिएकोमा २७ जना नयाँ […]